Malware sy fomba fialana ito - Ny Semalt dia hampiseho anao vitsy ny tricks
Julia Vashneva, Semalt Senior Manager Success Manager, dia hanokatra ny masonao amin'ny tricks sasany mila atao rehefa voaheloka amin'ny malware.
Saika ny antsika rehetra dia nanao viriosy sy malware amin'ny solosaina amin'ny ampahany sasany amin'ny fiainantsika. Marina ve izany? Tsy mahafinaritra ny manana viriosy; Raha tokony ho ianao kosa dia tokony hiahiahy amin'ny fiarovana an-tserasera anao sy ny fiarovana anao. Rehefa manomboka mihena ny ordinateranao, izany no fotoana tokony hisorohanao malware ary haka fepetra henjana - real time gaming software casinos in arizona.
Ampiasao amin'ny alamino
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny fampiasana fiarovan-tena amin'ny fotoana tsirairay. Izany dia hitazona ny rafitrao ho voaro amin'ny fanafihana amin'ny aterineto, ny vulnerabilities amin'ny aterineto, ny fiovan'ny viriosy ary ny fampidinana ny rindrambaiko. Ho an'ny fiarovana fara-tampony, tokony hizara rindrambaiko fiarovana ny tambajotra misy anao ianao ary hizaha ny fitaovana indray mandeha na indroa isan-kerinandro. Azonao atao ihany koa ny manandrana ny rafitra fisorohana ny fisorohana, ny firewall, ny Insight, ny SONAR, ary ny Antivirus ho an'ny fiarovana an-tserasera. Ny Symantec Security Response dia milaza fa tokony hitazona rafitra rindrambaiko sy rafitra misy antsika izahay.
Ampiheno ny fiakaran'ny fahavalo
Zava-dehibe ny fampihenana ny fihenan'ny tany amin'ny ankapobeny. Tokony hanala ny fampiharana izay tsy ampiasainao ianao. Avelao aho hilaza aminao fa ny teboka avo lenta mety hampidi-doza dia mety hiteraka fahavoazana lehibe eo amin'ny rafitrao. Izany no antony tokony hisafidiananao ny fitaovana ampiasainao mandritra ny andro iray ary mialà amin'ny fametrahana rindrambaiko tsy fantatra sy tsy ilaina.
Hanatsara ny fanovana Symantec Endpoint Protection
Zava-dehibe ny fanatsarana ny fiarovana ny tontolo iainana Symantec..Na ny fanovana vitsivitsy aza dia mety hitondra revolisiona ao amin'ny fiarovana an-tserasera. Tokony hitazona ny fikarakaranao ho an'ny fepetra takiana aminao ianao ary hiantoka ny fiainanao manokana mba tsy hahatonga anao hikapoka anao.
Tohizo ny tranokala browser vaovao
Ny ankamaroan'ireo mpanafika dia manombantombana ny navigateur ary avy eo manandrana mamindra ny rafitrao. Izany no antony maha-zava-dehibe ny mitazona ny safidin'ny tranonao sy ny plugins hatramin'izao. Tsy tokony hampiasa Internet Explorer, Acrobat, Flash, ary Abode Photoshop ianao raha tsy mijery ny ordinateranao na ny fitaovana findainao. Virosy maro sy malware dia miditra amin'ny rafitrao amin'ny Internet Explorer. Noho izany, tsara kokoa ny manalavitra an'io tranonkala io ary manandraman'i Google Chrome na tranokala hafa amin'ny safidinao.
Block ny fampiasana P2P
Ny iray amin'ireo fomba tsotra sy haingana indrindra ampiasaina hanaparitahana ny malware dia ny tambajotran'ny peer-to-peer (P2P). Tokony hanakana ny fampiasana P2P foana ianao. Ho an'ity, afaka mamorona sy mampihatra ny paikady P2P ianao toy ny fampiasana ny ordinateranao dia tokony ho voafetra ihany koa mba tsy hisy olon-kafa afaka miditra amin'ny fitaovana. Amin'izay dia azonao antoka fa ho voavonjy amin'ny ordinatera sy viriosy ny ordinateranao.
Azonao atao ny manakana ny fahatongavan'ny viriosy sy ny malware amin'ny alàlan'ny fanodinana AutoRun. Raha mila maimaim-poana ianao, dia tokony hanala izany foana ianao mba tsy hisy zavatra tsy ilaina ao amin'ny fitaovan'ny ordinateranao.
Mitandrema fa ny paty OS rehetra dia ampiharina
Farany fa tsy ny kely indrindra tokony ho azonao antoka fa ny paty OS tsirairay dia ampiharina tsara. Ireo orinasa toy ny pake Apple, Microsoft sy Google dia mamoaka ny fonosam-panatanjaham-pamokarana, ny famandrihana fiarovana ary ny famafana ireo mpanjifany maneran-tany isam-bolana Ny vokatr'izy ireo dia manampy antsika hanitsy ireo hadisoana ao amin'ny rafitra miasa. Azonao atao ny maka ireo vokatra ireo ary mametraka ao amin'ny solosainao ho fiarovana sy fiarovana amin'ny aterineto. Na mampiasa Mac OS X, Windows na rafitra hafa ianao, dia tokony hanavao ny navigateur sy programanao indray mandeha na indroa isam-bolana ianao.